Thwebula Blokker 2.0.9 – Vessoft
Blokker – a isofthiwe ukuvimba ukufinyelela amasevisi athile kanye nezicelo zedivayisi. Isofthiwe idinga ukusetha iphasiwedi bese ukhetha isicelo ezidingekayo ukuze bazivikele ukusetshenziswa abantu okungagunyaziwe. Ekuqaleni le Blokker, isofthiwe oyenza isebenze izithibelo izicelo akhethiwe kanye namasevisi, kanti ezinye izinhlelo ukusekela umsebenzi. Blokker emabhuloki i ukufinyelela ukucushwa kwe kudivayisi ngokuzenzakalelayo futhi kwenza ukususwa software ngaphandle kolwazi yomnikazi. Futhi, usebenzisa umbuzo imfihlo software kwenza ukubuyisela iphasiwedi ukhohliwe.
Blocks kuqale izicelo abakhethwe
Ukuqalisa Kalula izicelo ukuvikelwa
Ukuvikelwa softhiwe okungagunyaziwe ukususwa
Kuletha iphasiwedi usebenzisa umbuzo secret
Amazwana on Blokker:
Blokker Ahlobene software: